QBO KEESSATTI GANTUMMAAF SABABAAN HIN JIRU – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooQBO KEESSATTI GANTUMMAAF SABABAAN HIN JIRU
Damee jaarmaa fi Siyasaa biyya Ambaa
Gaafa:Fuulbaana 20. 2021
Adeemsa qabsoo kan bu’aa-bahiin guutame keesatti namni hifatuun,mufatuun fi sobamuun dirree qabsoo lakkisee diinatti galuun irra deddeebiin mudateera.Kun kan dhaabbatu gaafa qabsichi xumuramu duwwaa taha. Goollichi Dheengee kan Ajajaa WBO Zoonii Kibbaa Oromiyaa ture ganee diinatti galeera.Gochaa isaa kanaanis kabajaa fi jaalala qabsaawotaa fi ummatni Oromoo qabaniin of irraa mulqee seenaa isaa xureesseera. Gantummaaf tasumaa sababaan jiraachuu hin danda’u. Adeemsa qabsoo keessatti rakkoon bifa adda addaa mudachuu akka dandahu beekamaa dha.Namni dhugaan qabsoof gadi bahe rakkoolee mudatan dhaaba keessatti ilaa-fi-ilaameen fixachuuf obsaa fi bilchina qabaachuu qaba.
Qabsaawaan kaayyotti amanu seeraa fi heera dhaabaatti amanuu fi buluu qaba. Seeraa fi heera Dhaabaa hordofnaan rakkoon furmaata hin qabne hin jiraatu. Maqaa “Nutu siif yaadaa fi sitti aanaa”tiin fira fakkaatanii qilee kanatti kanneen oofan bitamtootaa fi ergamtootni nyaaphaa harka keessaa qabaachuun beekkamaadha. Jarreen kanatti isa dhiiban gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin bahan. Yoomiyyuu aangoo xixinnoo fi dantaa mataa bubuutuun bitamanii gochaa sabaaf hin tolle irratti kanneen bobbahan qaana’uu fi salphachuuf jiraatu.
Adda bilisummaa Oromoo keessatti hoggana irraa haamma miseensootaatti, deegagrtoota irraa hammaa sabboontootaatti qabsoo bilisummaa fi kaayoo ABOtti cichuun wareegama sadarkaa olaanaa kafalaa kaayyoo kana asiin gahan. Goochaa gantootaan utuu qalbiin keenya hin butamin, miseensoonni ABO caasaa mara keessa jirtan, Waraanni Bilisummaa Oromoo dirree keessatti aarsaa kafalaa jirtanii fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo akeekaa fi kaayyoo kana milkeessuuf tiokkummaa jaarmaya ABO jabeessuu fi mooraa QBO tiiksuuf cichoominaan akka hojjanuuf yaamicha gochaa ummanni Oromoos gantootaa fi ayyan-laallatoota irraa of eeggannoo akka gootan dhaammanna.
Hoggana ABO Biyya Alaa